Ny fanalan-jaza – 2trondro
Home / Fiangonana / Issues / Ny fanalan-jaza
Na dia fanao tranainy, fanalan-jaza dia iray amin'ireo olana ara-politika mampisara-bazana indrindra amin'izao androntsika izao. Inona no mahatonga izany ka? Mino isika fa ny zava-misy fa ny fitondran-tena olana amin'ny fitondran-tena vokany ... fa saika ny rehetra mahatakatra ho diso.
Tokoa, mino izahay fa tapahiny lalina kokoa an ny feon'ny fieritreretantsika noho ny olana hafa satria ny iniana famonoana ny tsy manan-tsiny olombelona ao am-bohoka, izay mifanohitra tanteraka amin'ny ny nentim-paharazana Judeo-Christian Etika sy ny soatoavina ara-tantara.
Ny Fiangonana Katolika dia manameloka ny fanamelohana ho faty, fa ny fanamelohana ho faty tsy tafiditra olombelona tsy manan-tsiny ny fiainana, sady tsy mitranga na aiza na aiza akaikin'ny tahan'ny izay mitranga fanalanjaza.
Tsy manameloka ny fanalan-jaza, koa, satria mahery setra dia asa izay mandray ny kely indrindra, tena marefo ny olombelona, ​​ary manimba ny olombelona ao ny olona mijaly sy feno herisetra ny fomba. Tsy tokony hamaritana ireo fomba masiaka eto, fandrao isika voampanga ho fihetseham-po fa tsy mampiasa lojika.
Izahay dia mangataka, na izany aza, Iza moa no azo atao ny sary an-tsaina nampahatezitra an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana kokoa? Tsy miahiahy fa Andriamanitra dia ho tafintohina noho ny loza lehibe hafa, toy ny ady, fa mahafantatra sy manohana firenena tsy manan-tsiny miaro ny tenany; raha ny tena izy, ny Baiboly dia feno ohatra ny ady fotsiny.1 Ny fanalan-jaza, na izany aza, maka zavaboary tsy afa-manoatra 'Andriamanitra–na inona na inona toe-javatra 'ny vohoka–ary minia mahafaty azy nefa tsy mamela azy ireo fahafahana hiaina sy manao asa mifanaraka amin'ireo ny–manao fanapahan-kevitra iray na asa amin'ny ny.
Fitondran-tena olana dia indraindray sarotra ho refesina na handrefy, i.e., hatsaran-toetra na fihetsika na evilness ny ny isan'ny fotoana fa mitranga. Ny fantatsika, na izany aza, izay eo ho eo 50,000,000 fanalan-jaza ara-dalàna no tanterahina any Etazonia hatramin'ny nalaza ratsy Roe V. Wade fanapahan-kevitra amin'ny 1973.
Dimam-polo tapitrisa very ainy. Izany tarehimarika dia manana fiantraikany eo amin'ny olana ara-politika hafa rehetra izay misy te handinika, koa. Ankehitriny, ny misanthropic, izay mijery olona toy ny enta-mavesatra, na mety ho enta-mavesatra, Mety ho faly noho ny zava-misy fa misy 50 tapitrisa ny olona vitsy kokoa. Na izany aza, raha mijery ny olona rehetra teo ho toy ny fanomezana avy amin 'Andriamanitra, feno hery ho an'ny tsara, avy eo 50 tapitrisa maty avy amin'ny fanalan-jaza dia zava-doza goavana.
Ny fiainana dia fiainana, na ny any na avy tany am-bohoka. Noho izany, azafady hevero izany, raha ara-dalàna ireo mba hamarana ny zaza teraka lahatsoratra–ary 4,000 ny ankizy no maty isan'andro toy ny amin'ny mialoha manala zaza teraka–nety maro mijanona ho tena atao sy mino an'izany? Misalasala isika izany.
koa, no miahiahy fa kely dia ho tafintohina noho ny zava-doza sy ny fitondran-, indraindray, koa. ↩